Akshat Choudhary's Zvinyorwa pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Akshat Choudhary
Unoziva here kuti pamusoro pe90,000 hacks anoedzwa miniti yega yega paWebhusaiti saiti pasirese? Zvakanaka, kana iwe uine rako reWordPress-rine webhusaiti, iyo stat inofanira kukunetsa. Izvo hazvina basa kana urikumhanya nebhizimusi-diki bhizinesi. Hackers havasarure zvichienderana nesaizi kana kukosha kwemawebhusaiti. Ivo vari kungotsvaga chero kushupika uko kunogona kushandiswa kune kwavo kuvabatsira. Unogona kunge uchishamisika - nei mavhavha achinangisa WordPress saiti mukati